mairie-antananarivo – Boriboritany faha-6 nahazo boky avy amin’ny mpanolontsaina manokan’ny ben’ny tanàna Marc Ravalomanana ny « Bibliothèque » ny boriboritany faha-6
Boriboritany faha-6 nahazo boky avy amin’ny mpanolontsaina manokan’ny ben’ny tanàna Marc Ravalomanana ny « Bibliothèque » ny boriboritany faha-6
auteur 7 octobra 2017 Commentaires fermés
Nahazo boky avy amin’ny Mpanolontsaina manokan’ny Ben’ny tanàna Andriamatoa Marc RAVALOMANANA ny trano famakiana boky teny amin’ny Boriboritany faha-6 ny Alarobia 4 Oktobra 2017. Miisa 192 ireo boky ireo ary ahitana karazany maro toy ny : « roman, encyclopédie, literature, BandeDessinée » sns.Raha araka ny nambaran’Andriamatoa Delegen’ny Boriboritany Faha-6 Fehizoro ANDRIAMANANJEZIKA dia ny andiany voalohany tamin’ireoboky izay nampanantenaina ireo tonga ireo fa mbola misy ihany hoy izy ny andiany manaraka. Ny tanjona amin’izao fanomezana izao hoy hatrany ity tompon’andraikitra ity dia ny hampitomboana ny isan’ireo boky izay efa misy ao amin’ny « Bibliothèque » mba hahafahan’ny rehetra mampitombo ny fahalalany.
50 isan’andro eo ho eo ireo olona tonga mamaky boky sy manovo fahalalana eny an-toerana izay ahitana ankizy kely, mpianatra, misy ihany koa ireo olon-dehibe. Misokatra ny Alatsinainy ka hatramin’ny Zoma manomboka amin’ny 8 ora maraina ka hatramin’ny 4 ora hariva ny tranom-boky ary tsy misy sarany izany fa maimaim-poana avokoa.
Tsy mitsahatra ny manentana ireo tsara sitrapo hafa ihany koa ny Delegen’ny Boriboritany faha-6 mba hamatsy boky ho an’ity « bibliothèque » ity. Mbola ho avy ihany koa hoy izy ny fametrahana ny « bibliothèque virtuelle » eny an-toerana mba ho fanampiana ireo mpianatra amin’ny fanovozam-pahalalany sy ny fikarohany.